Ny Dingana manaraka ho an'ny CarePoint Career: Management & Development
2 Mey 2017
Ny dingana manaraka ho an'ny CarePoint Career
Amin'izany fomba izany, manana ny satanao SharePoint anao ianao ary manamboatra toy ny saka kely. Ireo tale dia mankasitraka anao amin'ny fiovana goavana eo amin'ny ezaka mifanolo-tsaina, ary koa ny fahafaha-miala amin'ny fampahalalana tsy maintsy atao amin'ny toerana rehetra. Nahavita zavatra vitsy izay ianao, ry congrats!
Ny mahazatra dia ny fangatahana karazana ...
Azonao atao ve ny mikaroka amin'ny endrika fijerin'ny fikambananay?
Afaka ampidirintsika amin'ny rindrambaiko hafa ve izany?
Azo atao ve ny manitsy ny paikady amin'ny tanjona izay tsy mitaky fiomanana betsaka?
Izany dia miavaka amin'ny endriny mahagaga, nefa mety ho tsara kokoa raha tsara kokoa raha ...
Ny valin'ny fanontanianao matetika dia mahatratra tsara ny ampahany amin'ny sehatry ny administrateur ary mitaky ny hitondranao ny mpanamboatra anao ambony, na inona na inona fotoana mandritra ny fotoana fohy. Aoka ho toy izany, mitazona ... tsy mpanamboatra anao ianao.
Ny hetsika mahavokatra ho an'ny fanatsarana dia fomban-javatra marobe izay mety ho mavesatra amin'ny voalohany, na dia tsotra aza ny manatona amin'ny fandaminana mendrika sy ny fanomanana marina. Amin'ny fandresena anao Microsoft MCSD: Fanamarinana App Builder, afaka mametraka ny tenanao ianao mba hiatrehana ny fahasarotam-panahin'ny fizakan'ny SharePoint tsindraindray. Ho valisoa ianao dia manangona fiarovana ara-barotra hafa koa. Tena azo antoka izany SharePoint Ny injeniera dia mahatsikaiky tokoa amin'izao fotoana izao!
Na inona na inona ataonao na rafitra irery SharePoint toeram-pambolena, tsy misy isalasalana fa misy ora tsy tambo isaina mametraka ny loharanom-pahefana amin'ny famolavolana ny fepetran'ny servero mba handrindra ny filan'ny fikambanana. Ny fianarana ny rafitra tsy miovaova SP dia manome toerana lehibe ho anao rehefa fotoana lehibe ahafahana manatsara ny fanatsarana. Manomboka izao dia manana fahatakarana an-tsisintany ny momba ny fomba SharePoint sy ny zavatra tadiaviny amin'ny fikambanana.
Amin'izao fotoana izao, misy ny fahafahana mifandray amin'ny SharePoint izay tsy mila code. Fandaniam-potoana hananganana fandaharam-potoana mahazatra raha toa ka misy ny hery amin'izao fotoana izao ao amin'ny SharePoint. Eo andalam-pamafazana, dia heverina ho manana fikirizana mafy ny rafitra fanatsaràna izay mahaliana amin'ny SharePoint, ohatra, ny tranonkala famangy, fampiharana, fidirana, rakitsoratra ary rakitsoratra. Tokony hampiarahanao amin'ny tenanao ihany koa ny fitaovana fanovaovana SharePoint, Microsoft Office SharePoint Designer. Manimba ny fomba amam-panao samihafa izany dia tsy mitaky programa hanatanterahana izany.
Azonao atao ny mampitombo ny fahalalanao miaraka amin'ny kilasin'ny fampianarana fampianarana vitsivitsy SharePoint. Ireo làlana ireo dia nanosika anao hanohy ny fampandrosoana an'i SharePoint amin'ny fanomezan-toky fa manana ny lanjan'ny fahazoan-danja manan-danja ianao mba hanoratana code fiterahana sy azo ampiasaina ho an'ny SharePoint:
Ny Microsoft SharePoint Server 2013 70-331 dia mandrindra ny fananganana fototra sy ny fandaminana. Na inona na inona mety hitranga aminao amin'izao fotoana izao dia kely dia kely monja amin'ny fampahalalam-baovao, afaka mahazo tombony ianao noho ny halalin'ny fahalalany izay omen'ity lalana ity.
Rehefa miomana handroso amin'ny SharePoint Padawan mankany amin'ny Jedi Master ianao, dia hahatratra anao ny lalana Microsoft SharePoint Server 2013 70-332 mivoatra bebe kokoa! Drafitra miavaka amin'ny famenoana sy fampidirana ireo vahaolana manokana, anisan'izany ny fitantanana tambajotra momba ny orinasa mba hampifandray ny SharePoint amin'ny rafitra hafa.
Ho valisoa, ny roa amin'izy ireo dia mametraka anao ho an'ny fanadinana Microsoft mifandraika amin'ny lozanao izay tianao hanampiana azy ireo amin'ny MCSE anao: famolavolana vokatra.
Ireto manaraka ireto manoloana ny MCSD: Ny mari-pamantarana fananganana App dia ny mahazo MCSA: Web Applications na MCSA: Ny Universal Windows Platform cert. Azonao atao ihany koa ny mifidy, satria samy miavaka ny fanatsarana ny SharePoint. Raha ny marina dia mety ho malina ny hanaraka azy roa.
Misy fanadinana anankiroa izay takiana mba hahazoana izany Fanamarinana MCSA, ary dia mitaky be dia be ny fanomanana sy ny fomba an-tanana ny fahazoana ny fahatakarana ampy ASP.NET or C # fandaharana. Visual Studio dia mamela anao haka ohatra avy amin'ny fampiharana SharePoint, ary i Microsoft dia manome valim-panadinana mitodika amin'ny toe-javatra maro samihafa mety hitranga. Miaraka amin'ireny fitaovana enti-mampianatra ireny, ny manam-pahefana tonga lafatra toy ny tenanao dia afaka mampitombo ny fahaizanao mandroso amin'ny fahitana maso.
Rehefa tapitra ireo fomba ireo, dia azonao atao ny manatanteraka azy App Builder Azo antoka fa mandalo amin'ny fanadinana Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions. Ity fanadinana ity dia mifantoka amin'ny fampiasana programa roa na vahaolana tsy-code mba hampifanaraka tsara ny fanorenana SharePoint amin'ny filan'ny fikambanana.
Ny arabe mankany App certification mpikaroka dia mety ho fandoavam-bola manokana ny fanabeazana. Ireo olana izay toa tsy azo navotsotra dia azo adika miaraka amina fehezan-dalàna roa monja. Azonao atao ny manao ny injeniera vaovao ho anao tsara rehefa maka tombombarotra ny fikambananao!
Ny fitaovana ampiasain'ny Microsoft amin'ny laptop Windows no namorona Windows 10 S: Taratasy, Karama sy endri-javatra